स्वास्थ्य Archives - नेपाल आज
वैशाख – १२ । सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि देशभरका ८८९ सरकारी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसरी निवेदन दिनेमा पाँचौँ तहदेखि एघारौँ तहसम्मका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखाका निर्देशिक डा भोलाराम श्रेष्ठले मन्त्रालयमा दर्ता […]
वैशाख १२ । रुपन्देहीको सदरमुकाम सिद्धार्थनगर (भैरहवा) औलो रोगको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीले गरेको सर्भेक्षणअनुसार सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका १३ वडामध्ये वडा नम्बर १ र ३ औलोको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेकोे छ । खुला सिमानाका, खाल्डाखुल्टीमा जम्ने पानीलगायतका कारण सिद्धार्थनगर उच्च जोखिममा परेको जनस्वास्थ्य कार्यालय, रुपन्देहीका प्रमुख केहरसिंह गोदारले जानकारी दिए […]
बैशाख १२ । मानव जीवनमा कतिबेला के हुन्छ भन्ने कुराको केही टुंगो हुँदैन । त्यस्तै बेलायतकी जोलेनी ब्रोड नाम गरेकी एक महिलाको जीवनमा पनि अप्रत्यासीत घटना घटेको छ । बेलायतकी ती महिलाले गर्भवती भइसकेपछि पुनः अर्को पटक पनि गर्भ धरण गरिन् । रिपोर्टकाअनुसार उनले पहिलो पटक जुम्ल्याहा शिशुलाई जन्म दिइन् । त्यसको दुई हप्तापछि तेस्रो […]
प्रधानमन्त्रीले खुलेरै गरे स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रशंसा
वैशाख १२ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छोटो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको बताएका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सभाको आठौं वैठकमा सोमबार दाहालले स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले छोटो समयमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति पाउने गरी काम गरेको भन्दै थापाको खुलेर प्रशंसा गरे । प्रतिष्ठानको कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले केही महिनाको अन्तरालमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै नयाँ […]
स्वास्थ्य कर कोषको रकम माग गर्दै २ सय ७३ संस्थाद्वारा निवेदन
वैशाख – १० । धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगबाट उत्पन्न हुने रोग नियन्त्रण, रोकथाम, निदान र उपचारका लागि स्वास्थ्य कर कोषबाट अनुदान माग गर्दै दुई सय ७३ गैरसरकारी अस्पताल र संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवदेन दर्ता गराएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य कर कोषको सचिवालयको कार्यालयले गत फागुन ६ गते कर कोष रु चार करोड रकम […]
चौध दिनको अस्पताल बसाईपछि डिस्चार्ज भईन पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा
वैशाख १० । पक्षघात भएपछि चैत्र २७ गते अस्पताल भर्ना भएकी पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंह आज डिस्चार्ज भएकी छन् । १४ दिनको नर्भिक अस्पताल बसाई पछि आज उनलाई डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उनी अहिले हिँडडुल गर्न सक्ने भएको पनि जनाएको छ । उनको स्वास्थ्य उपचारमा नर्भिकको स्नायू रोग विशेषज्ञ डा. […]
कागवेनी घाइतेको उपचारगर्न मणिपाल अस्पतालले मानेन्
वैशाख १० । पोखरास्थित चर्चित मणिपाल शिक्षण अस्पतालले मुस्ताङको कागबेनीमा भएको दुर्घटनाका गम्भीर घाइतेलाई उपचार गर्न अस्वीकार गरी फर्काइदिएको छ । कागबेनीमा भएको दुर्घटनालगत्तै हेलिकोप्टरबाट शनिबार दिउँसो पोखरा ल्याइएका घाइतेलाई मणिपालले आपतकालीन उपचार दिन अस्वीकार गरेपछि पोखराकै अन्य अस्पताल लैजानुपरेको थियो । कागबेनीमा बस दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका १५ जनालाई सेनाको हेलिकोप्टरबाट मणिपाल अस्पताल […]
वैशाख ९ । मारवाडी सेवा समिति विर्तामोडले कब्जियत, सुगर, अनिन्द्रा, पत्थरी, रक्तचाप, गठियावाद, दम, माइग्रेन, घुँडा दुख्ने, टाउको दुख्ने, मोटोपन, थाइराइडलगायतका रोगीलाई मध्यनजर गर्दै बिना औषधि एक्युप्रेसर तथा सुजोग पद्दतिद्वारा निःशुल्क उपचार शिविर विर्तामोडमा सुरु गरेको छ । ११ दिनसम्म चल्ने शिविरमा एक्युप्रेसर पद्दतिबाट उपचार गरिने शिविर आयोजक समितिका संयोजक भगवाद दास सिङगलले जानकारी दिनुभयो […]
वैशाख–८ । एक सातायतादेखि दमौली अस्पतालमा रुघाखोकी र झाडापखालाका बिरामीको सङ्ख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । दैनिक १५० भन्दा बढी त्यस्ता रोगका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । वैशाख लागेदेखि नै त्यस्ता रोगका बिरामीको सङ्ख्या बढेको हो । यसअघि उक्त रोगका बिरामी छिटफुट रुपमा मात्रै उपचारका लागि आउने गर्थे । दमौली अस्पतालका […]
होसियार ! तपाईको बच्चालाई पनि लाग्ला ‘माछाकत्ले’ रोग
वैशाख ८ । भारतको नयाँ दिल्लीमा भर्खरै दुई वर्ष पुगेकी एक बालिकालाई छालासम्बन्धीको रोगले कुरुप बनाइदिएको छ । शरीरको छाला सबै छेपारोकोजस्तै बाक्लो र पत्र–पत्र छुट्टिएपछि मानिसहरुले उनलाई ‘छेपारो केटी’ समेत भन्न थालेका छन् । मेडिकल भाषामा ‘लमेल्लर इच्थ्योसिस्’ भनिने छालासम्बन्धी यस्तोे रोग ६ लाख बालबालिकामा एकजनालाई हुनसक्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । यस्तो रोगलाई सामान्य […]
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरका नाममा मानवअंग बेचबिखन Posted on: April 20, 2017Posted by: netra
वैशाख – ७ । पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य शिविरमार्फत मानवअङ्ग झिक्नका लागि आधार तयार गर्ने गरेको पाइएको छ । विहीबार राजधानीमा जनअधिकार संरक्षण मञ्च नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपालमा मिर्गौला बेचबिखन’ विषयक अन्तक्र्रियामा हालका वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने बेचबिखन तथा मानवअङ्ग झिक्न गरिने बेचबिखनका नयाँ स्वरुपका रुपमा देखा परेको जानकारी दिइयो । प्रहरी उपरीक्षक किरण बज्राचार्यले […]
‘एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार परियोजना’का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्याे एक खर्ब सात अर्ब
वैशाख – ६ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सात वर्षमा देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि एक खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । मन्त्रालयले सातवर्षे ‘एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार परियोजना’अन्तर्गत सेवाका आधारमा अस्पतालको वर्गीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था बसाल्न उपकरण, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास गर्न उक्त रकम आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा हिजो मङ्गलबार प्रस्ताव पेस गरेको […]
सरकारले भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउँदै
वैशाख–६ । सरकारले देशभरका छ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका करिब दुई लाख २८ हजार बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाउँदै छ । बाल स्वास्थ्य महाशाखाअन्तर्गतको पोषण शाखा प्रमुख राजकुमार पोखरेलले भिटामिन ‘ए’ सँगै एक वर्षदेखि पाँच वर्षमुनिका करिब २२ लाख ९८ हजार बालबालिकालाई जुकाको औषधि ‘अल्वेन्डाजोल’ पनि खुवाइने जानकारी दिए । उनले भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइने […]
गिद्धलार्इ असर पार्ने डाइक्लोफेनेक प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता
वैशाख – ५ । सुनसरीका पशु प्राविधिकले गिद्धलाई असर पार्ने डाइक्लोफेनेक नामक औषधिको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिकास्थित वसन्तपुरमा सोमबार सम्पन्न भएको एक दिने गिद्ध संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भएका पशु प्राविधिकले पशुमा डाइक्लोफेनेक औषधिको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। डाइक्लोफेनेक औषधिको प्रयोगका कारण गिद्ध लोपन्मुख अवस्थामा पुगेको एक अध्ययनले देखाएको तथ्य कार्यक्रममा प्रस्तुत […]
वैशाख–४ । गर्मीयामको सुरुआतसँगै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा ज्वरोको उपचार गर्न आएका ३० वर्षीय एक युवकमा स्वाइन फ्लु पुष्टि भएको छ । अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले युवकमा उक्त रोगको भाइरस पुष्टि भएको जानकारी दिए । नेपालमा गत वर्षको बर्खायाममा स्वाइन फ्लुको भाइरस देखिए पनि यस पटक निकै अगाडि देखिएको […]
पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार
वैशाख ४ । गत चैत २५ गते शुक्रबारदेखि नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत् पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा सिंहको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकीय टोलीले सिंहको बायाँ खुट्टामा देखापरेको कमजोरीमा उल्लेखनीय सुधार आइ थप सहारामा हिँडडुल गर्नसक्ने भएको जनाएको छ । सुरुआतमा ‘सेरिवल भनेस् साइनस् थम्बोसिस’ भएको पाइएको र सोहीअनुसार उपचार चलाइएको अस्पतालले आइतबार […]
वैशाख ४ । असोजयता उपत्यकाको प्रदूषण मात्रा पटक–पटक राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा धेरै माथि पुगेको छ । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार उपत्यकाको हावामा पिएम २।५ को मात्रा ४० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्दछ । तर उपत्यकाको हावामा पार्टीकुलेट म्याटर ९पिएम० २।५ को मात्रा २ सय माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर भन्दा माथि पुगेको तथ्याङ्क छ । औसतभन्दा प्रदूषण मात्रा बढी ९हानिकारक […]
बैशाख २ । दाँतले अनुहारलाई सुन्दर देखाउन मद्दत गर्छ । दाँत सफा हुँदा अनुहार सुन्दर देखिनुका साथै व्यक्तित्व पनि राम्रो हुने गर्छ । तर, हाम्रा केही यस्ता बानी छन् जसका कारण दाँत बिग्रने सम्भावना बढि हुन्छन् । दाँत बिगार्ने १० गल्ती यस्ता छन् । १. नियमित परीक्षण नगर्नु — नियमित परीक्षण दाँतको स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त […]
मानसिक रोगी दिनानुदिन बढ्दै
वैशाख–२ । नेपालमा मानसिक रोग थपिँदै गएको मनोचिकित्सकहरुले बताएका छन् । बेवारिसे हुने, बाँधेरै राख्नुपर्ने अवस्थालाई मात्र मानसिक रोग मान्ने प्रवृत्तिका कारण दिनानुदिन रोगी थपिएको चिकित्सकहरुको भनाइ छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा.सरोजप्रसाद ओझाका अनुसार मानसिक रोगी स्वास्थ्य संस्थासम्म पुगे पनि रोगबारे खुलेर बोल्न हिच्किचाउँछन् । यसबारे खुलेर कुरा नगरेसम्म रोग निर्मूल नहुने […]
यी ९ शुत्र अपनाउनुहोस् र सधैँ स्वस्थ रहनुहोस् Posted on: April 12, 2017Posted by: netra
स्वस्थ रहनु सबैको आवश्यकको विषय हो । तर, कसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ भन्ने खबरबारे धेरै मानिसहरु अनविज्ञ नै छन् । यदि हाम्रो जीवनशैली स्वस्थ छैन भने त्यसलाई समयमै परिवर्तन गर्नुपर्छ । तसर्थ स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने आधारहरु यस्ता छन् । १. निन्द्रा — निन्द्रा स्वस्थ जीवनशैलीको महत्वपूर्ण पाटो हो । निन्द्राले शरीरलाई आराम प्रदान गर्नुका साथै […]
बिहे भएको ६ महिनामै बच्चा जन्मिए पनि स्वीकार्नुपर्ने !
चैत २९ । सामान्यतया नौ महिनामा बच्चा जन्मने चक्र हुन्छ । नौ महिनापछि जन्मेको शिशु विवाह गरेको पुरुष र उसको परिवारले स्वीकार गर्ने नेपाली परम्परा छ । तर मुलुकी ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्माण भएको कानुनमा विवाह भएको मितिले एक सय ८० दिनपछि जन्मेको शिशु विवाहित पतिबाटै जन्मेको मानिने प्रस्ताव गरिएको छ । पतिको मृत्यु भएमा […]
Posted on: April 10, 2017Posted by: Bishow Rimal
चैत्र–२८ । सरकारले झाडापखाला एवम् कलेरा (हैजा)को नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ पञ्चवर्षीय तयारी तथा सम्बोधन योजना सुरु गरेको छ । नेपाल हैजाको जोखिममा छ । हरेक वर्ष विभिन्न स्थानमा महामारीको रुपमा फैलँदा धेरै मानिसले ज्यान गुमाइरहेकाले यसको नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आज पञ्चवर्षीय तयारी तथा सम्बोधन योजना सार्वजनिक गरेको हो । इपिडिमियोलोजी […]
जापानी नागरिकको आर्थिक सहयोगमा पाल्पाको दुर्गम गाउँमा आँखा शिविर
चैत्र–२८ । जापानी नागरिक काजुमासा काकिमी (ओकेबाजे) को आर्थिक सहयोगमा पाल्पाको दुर्गम र विकट क्षेत्र निस्दी गाउँपालिका–२ सहलकोटमा एकदिने निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको छ । शिविरबाट १२५ जना बिरामीले सेवा लिएका छन् । गाउँमै आँखा उपचार गराउनाका साथै औषधि उपचार निःशुल्क पाएपछि यहाँका स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । पाल्पाको ग्रामीण भेगमा रहेर लामो समयदेखि […]
योगका १६ फाइदा यस्ता छन्
हरेक मानिस स्वस्थ रहन चाहन्छन् । तर, जति कोसिस गरे पनि रागले छोड्दैन् । थाहै नदिकन रोग लाग्ने गर्छन् । स्वस्थ रहनको लागि मानिस बिहानबिहानै जीम गर्छछन्, दौड्छन्, नृत्य गर्छन्, कराते, ब्याडमिन्टन, एरोबिक जस्ता खेल खेल्छन्, तैपनि भनेजस्तो हुँदैन् । स्वस्थ रहनको लागि यस्ता उपाय अपनाए पनि पूर्ण रुपले फाइदा दिएको हुदैन् । स्वस्थ रहनको […]
चैत्र–२६ । विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि विभिन्न कारणले उदासीनता अर्थात् डिप्रेसनका रोगी बढेको चिकित्सकले बताएका छन् । अझै पनि मानसिक समस्यालाई लुकाएर राख्ने उपचारमा नजाने कारणले गम्भीर खालका घटनामा वृद्धि भएको छ । यसबारेमा सबैले खुलेर कुरा गर्नुपर्ने त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा सरोजप्रसाद ओझा बताउछन । यस वर्ष विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले […]
चैत्र २५ । नेपालमा स्तन क्यान्सरका रोगी बढ्दै छन् । लाज, डर र अज्ञानका कारण यो रोग लुकाउने महिला पनि थुप्रै छन् । नियमित चेकजाँचमा सजिलै पत्ता लाग्न सक्ने स्तन क्यान्सरको सम्पूर्ण उपचार नेपालमै हुन्छ र उपचार महँगो पनि छैन । क्यान्सर भएपछि निको हुँदैन भन्ने भय र भ्रमले रोगीको मनोबल गिरेको हुन्छ । तर, […]
डाइटिङ भनेर खान छोड्ने हैन सन्तुलित भोजन गरौँ — दिपिका पादुकोण
Posted on: April 6, 2017Posted by: Bishow Rimal
चैत-२४ । शरीरको तौल धेरै भएर डाइटिङ गर्नेहरु अधिकांश भेटिन्छन् । कोही कोही त तौल बढ्छ भनेर शरिरलाई आवश्यक पर्ने खानेकुरा पनि नखाई बस्ने गर्छन् । तर त्यसो गर्नु गलत भएको बलिउड अभिनेत्री दिपिका पादुकोण बताउँछिन् । दिपिका भन्छिन्, ‘वजनलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि खाना खान छोड्नु ठिक होइन तर सहि खानेकुरा खानु हो । शरीरको […]
Posted on: April 6, 2017April 6, 2017Posted by: Bishow Rimal
चैत्र–२४ । पर्वतको एक विकट गाउँमा सञ्चालित एक दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा २०० भन्दा बढी आङ खस्ने समस्या भएका महिलाको उपचार गरिएको छ । आर्थिक अभावका कारण लामो समयदेखि आङ खस्ने समस्या लुकाएर बसेका महिलालाई लक्षित गर्दै दक्षिण पर्वतको महाशिला गाउँपालिका–५ लुङ्खुदेउराली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आयोजित एक दिने पाठेघर तथा आङ खस्ने रोगबाट पीडित महिलाको […]
यस्ता छन् काजु खानुका मुख्य ९ फाइदाहरु
बढी मुल्य पर्ने काजुका फाइदा पनि बढी मुल्यवान छन् । काजु खानुका केही फाइदाहरु यस प्रकार छन । १) थकान हटाउँछ — काजुलाई ऊर्जाको राम्रो स्रोत पनि मानीन्छ । केही काम नगर्दा पनि थकान महसुस हुन्छ अथवा काम गर्ने मुड बन्दैन भने काजु खानाले तपाईंको शरीरमा ऊर्जा थपिनगई फुर्ती आउँछ । २) अनुहार चम्किलो बनाउँछ […]
Posted on: April 4, 2017Posted by: Tirtha Khanal
चैत २२ । सडकमा गुड्ने साधनले जथाभाबी हर्न बजाउँदा ध्वनि प्रदूषण बढेको भन्दै नियामक निकायले काठमाडौंका सडकमा हर्न बजाउन रोक लगाएका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको चैत २० गतेको संयुक्त बैठकले हर्न बजाउन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । सडकमा गुड्ने यातायातका […]
खाना खाँदा पानी पिउने बानी छ, यस्तो समस्या आउला
चैत्र २० । पानी जिवनका लागि अत्यावश्यक तत्व हो । पानी बिना हामी जीवनयापन गर्न सक्दैनौ । पर्याप्त पानी पिउनु मानव स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य कुरा पनि हो । तर पानी पिउनुछ भन्दैमा खाना खाइरहेको बेला पानी पनि पिउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुँदैन, यसले स्वास्थ्यमा असर गर्दछ । खाना खाइरहेको बेला पानी पिउनाले स्वास्थ्यमा पर्ने असर […]
बिरामीकै हातमा कान उमारेर सफल प्रत्यारोपण
चैत २० । चिनियाँ चिकित्सकको एक टोलीले दुर्घटनामा कान गुमाएका एकजना बिरामीको लागि बिरामीकै हातमा दाहिने कान उमारेर प्रत्यारोपण गरिदिएका छन् । चिकित्सकहरुले कानको लोती बिरामीकै हातको नाडीभन्दा पछाडिको भागमा कृत्रिम पद्धतिबाट उमारेर दुरुस्तै देखिने गरी शल्यक्रियामार्फत् सफल प्रत्यारोपण गरिदिएका हुन् । प्रत्यारोपण टोलीका प्रमुख प्लाष्टिक सर्जन डा.गुओ शुझोंगले गत साता करिब सात घन्टा लगाएर […]
विश्वमा तीस करोड मानिसमा मानसिक समस्या
चैत २० । विश्वभरीका झण्डै तीस करोडभन्दा बढी मानिसमा मानसिक समस्या रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायले विश्व स्वास्थ्य दिवसको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । डब्लुएचओका महानिर्देशक मार्गरेट चानले भनिन्, ‘यो तथ्यांकले मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा सबै देशहरुले पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ, सबै देशहरु फेरि जाग्नुपर्ने भएको […]
Posted on: April 1, 2017Posted by: Bishow Rimal
चैत्र–१९ । नेपालमा ५८ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित रुपमा हुने गरेको पाइएको छ । वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा)ले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा कुल गर्भपतन मध्ये ५८ प्रतिशत असुरक्षित रुपमा हुने गरेको पाइएको हो । ४२ प्रतिशतले मात्रै नेपाल सरकारले मान्यता दिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको अनुसन्धानकर्ता डा महेश […]
विश्वभरी तीस करोड मानिसमा मानसिक समस्या
चैत्र–१९ । विश्वभरीका झण्डै तीस करोडभन्दा बढी मानिसमा मानसिक समस्या रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायले विश्व स्वास्थ्य दिवसको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । डब्लुएचओका महानिर्देशक मार्गरेट चानले भनिन्, ‘यो तथ्यांकले मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा सबै देशहरुले पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ, सबै देशहरु फेरि जाग्नुपर्ने भएको छ, […]